Shiinaha Ac Compressor Warshadaha Warshadaha ee Mazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3 soosaarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Hollysen
Ac Compressor Warshadaha Warshadaha ee Mazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3
Marka laga reebo cutubyo hawo qaboojiyaha baabuurta oo madax-bannaan oo ballaaran, kombiyuutarrada hawo-qaboojiyaha baabuurta ee guud waxay ku xiran yihiin usha ugu weyn ee mishiinka iyada oo loo marayo qabsashada elektromagnetiga. Joogsiga iyo bilowga kombaresarada waxaa lagu go'aamiyaa jiidista iyo sii deynta xajinta elektromagnetka.
Marka laga reebo cutubyo hawo qaboojiyaha baabuurta oo madax-bannaan oo ballaaran, kombiyuutarrada hawo-qaboojiyaha baabuurta ee guud waxay ku xiran yihiin usha ugu weyn ee mishiinka iyada oo loo marayo qabsashada elektromagnetiga. Joogsiga iyo bilowga kombaresarada waxaa lagu go'aamiyaa jiidista iyo sii deynta xajinta elektromagnetka. Sidaa darteed, xajinta elektromagneticku waa qayb fulin ah oo ku jirta nidaamka kontoroolka tooska ah ee hawo-qaboojiyaha baabuurta. Waxaa saameeya bedelka heerkulka (heerkulbeegga), beddelka cadaadiska (relay cadaadiska), gudbinta xawaaraha iyo xakamaynta furaha korontada iyo qaybaha kale. Waxaa guud ahaan lagu rakibay dhammaadka hore ee kombaresarada.
Qalabka elektromagnetic -ka waxaa sidoo kale loo yaqaannaa isku xirnaanta electromagnetic. Waxay isticmaashaa mabda'a induction electromagnetic iyo kala -goynta u dhexeeya taarikada is -qabsiga gudaha iyo dibedda si ay u sameeyaan laba qaybood oo isku -rog ah oo ku jira nidaamka gudbinta farsamada. Xaaladda ah in qaybta firfircoon aysan joojin meereysiga, qaybta la wado waxaa la isku dari karaa ama laga sooci karaa isku -xirka farsamada korontada. Qalabku waa qalab koronto oo si toos ah loo fuliyay. Qalabka elektromagnetic -ka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo bilowga, dib u noqoshada, xeerka xawaaraha iyo joojinta mashiinka. Waxay leedahay faa'iidooyinka qaab -dhismeedka fudud, ficil dhakhso leh, tamar koontarool yar, oo ku habboon kontoroolka fog; in kasta oo uu cabbirkiisu yar yahay, haddana wuxuu gudbin karaa torque weyn; marka loo isticmaalo xakamaynta bareegga, waxay leedahay faa'iidooyinka jebinta degdegga ah oo deggan.
Fasaxidda iyo rakibidda tallaabooyinka kombiyuutarrada hawo-qaboojiyaha baabuurka
Geedi socodka tillaabooyinka kala-goynta ee kombaresarada hawo-qaboojinta baabuurka:
Fiiro gaar ah: Si looga hortago wasakhda iyo qoyaanka hawada inay ku soo ururaan qaybaha oo galaan nidaamka, qaybaha kala firdhay waa in sida ugu dhakhsaha badan dib loogu soo celiyaa.
PerateIn la hawlgeliyo nidaamka soo kabashada ee qaboojiyaha qaboojiyaha.
IsKa jar xarigga fiilada xun ee batteriga.
Ka saar suunka baabuurka.
Ka saar bareegyada hawo qaboojiyaha cadaadiska sare iyo kan hoose ee kombaresarada.
Ka jar jariyaha isku xirka suunka.
Ka saar kombuyuutarrada boorsooyinka hagaajinaya oo ka saar kombaresarada.
Habka rakibidda kombaresarada hawo-qaboojiyaha baabuurka:
Stall Ku rakib qalabka wax lagu hagaajiyo ee kombiyuutarka, rakib oo adkee boosta hagaajinta kombaresarada.
OnKu xir isku xiraha suunka kombaresarada.
OMuujinta teknolojiyadda madaxa tuubada hawo-qaboojiyaha hawo-qaboojiyaha.
Stall Ku rakib suunka baabuurka.
OnKu xidh xadhkaha fiilada xun ee batteriga.
PerateIn la shaqeeyo nidaamka buuxinta qaboojiyaha qaboojiyaha.
Mazda CX3 & 2 / Mazda Demio 2014-2016
Hore: Compressor Auto Ac oo loogu talagalay Honda N-BOX / Honda Brio / Honda Jazz
Xiga: Compressor -ka Auto Ac iyo Warshadda Warshadaha ee Laydhka ee Toyota Passo / Toyota Corolla / Toyota Terios
Auto Ac kombaresarada iyo Warshadda Golaha Lidka ...